SomaliaReport: MV Dover Lasii Daayey Laakiin Qoyskii Danishka
Urur Budhcad-badeedka loo yaqaan Ali Zwahila ee ka hawlgala agagaarka Hurdiyo ayaa haysta markabka MV Dover iyo qoyska Danishka ah.
Sidaan horay u soo sheegnayba dadka deegaanka oo ka soo horjeeda falalka danbi iyo amni daro ee ay ku kacaan B/badeedda ayaa ka soo eryey dhul xeebeedyadaii ay joogeen.
Wargayska Somalia Report ayaa sheegay in madaxfurasho gaadhaysa ilaa 3 Milyan oo Dollar lagala baxay markabkii MV Dover iyo shaqaalihiisii oo gaadhaya 23. balse B/badeedda ayaa la hadhay oo wali haysata qoyskii Danishka ahaa iyada oo laga soo dayrinayo xaaladdooda caafimaad ee maskax iyo muuqaalba. Waraysiyadii laga qaaday qoyska ayaa ahaa kuwo beerlaxawsi ahaa oo ay B/badeeddu ku doonayso inay ku helaan lacag badan.
Qoyskan Danishka ah iyo laba shaqaale ayaa la qafashay bishii Feb 24keedii iyaga oo dhex mushaaxaya badda. Qoyskan ayaa iska ahaa dad dan yar ah isla markaanaa hantidii ay haysteen ku iibsaday markabkan yar, nasiib daro wuxuu markabku wataa sumad ay iska leedahay shirkad caan ku ah adeegga dhaqaalaha”ING”, oo loogu magic daray mlkiilihii hore ee iska lahaa.
B/badeedda ayaa markii hore aad uga walwalsanayd inay la kulmi doonaan arintii kal hore ku dhacday afartii maraykanka ahaa ee markabkii SV Quest. Ciidamada caalamiga ah ayaa markan muujiyey taxaddar aad u sareeya maadaama ay meesha ku jirto amaanka caruur iyo maati, waxayna ku dadaalayeen inaysan mar danbe dhicin musiibadii ku habsatay afartii muwaadin ee maraykanka ahayd, arintaas oo ay sababteeda lahaayeen degdeg ka yimid ciidanka badda ee maraykanka iyo mukhalas aan khibrad u lahayn wada-xaajoodka la hayste-yaasha kana tirsanaa hay’adda dabagalka ee FBI-da loo yaqaan taasoo keentay dilka afar maraykan ah.
Dadka deegaanka ayaa B/badeedda kala hor yimid cadho iyo iska cabin, waxaana isla markiiba weeraro ku qaaday ciidanka amaanka ee Puntland. Bishii Maarso 11-keedii ayaa kolonyo gaadiidka bilayska ah ay ka dhaqaajiyeen magaalada Qardho iyaga oo ku sii jeeda magaalada Xul-caanood, balse B/badeedda ayaa ka warheshay dhaqdhaqaaqaas, waxaana dhacay dagaal sababay dhimashada 4 ciidanka amaanka ah iyo 2 B/badeed. Khalkhalka ku yimd B/badeeddan ayaa keenay inay qoyskan dib ugu celiyaan markabkii ay in yar ka hor sii daayeen ee MV Dover iyo 23kii shaqaale ee saarnaa.